Epreli 28, 2021 0 IiCententarios 185
Ii-tweets ezininzi ezabelwana ngazo zonke iibrawuza ze-cyber zinolwazi olungenasiphelo, ezinje ngeetekisi, imifanekiso okanye iividiyo.. Uhlobo lwezi tweets luqala kwiindaba, iminyhadala, iindlela zokuzonwabisa, iindlela zokuphila, iingcebiso phakathi kwabanye abaninzi.
Ngamaxesha amaninzi, kuya kufuneka ugcine ezinye iinkcukacha ozifumana kwinethiwekhi yoluntu. Ngokukodwa ukuba injongo yakho kukwabelana ngayo kwezinye iinethiwekhi, okanye ukuyigcina kwezinye iinjongo.
IiVidiyo zezona zinto zifunwayo kwi-twitter, njengoko zibonisa elona nani likhulu lolwazi kwi-tweet apho unokuchwetheza kuphela abalinganiswa abangama-280. Ukukhuphela kwi-twitter, kuya kufuneka ulandele amanyathelo, nangona kulula, kuya kufuneka usebenzise izixhobo ezithile.
Ukuqala inkqubo yokukhuphela
Xa uqhagamshelwe kwifowuni yakho ye-Smartphone okanye yeCwecwe, unokufuna usetyenziso lokukhuphela iividiyo.
Kwivenkile yesicelo ye-Smartphone yakho unokufumana ezinye zezi zicelo. Phakathi kwezona zaziwayo, ezinamanqaku aphezulu kwaye zacetyiswa ngabasebenzisi esinazo: Snaptube, Isikhupheli seeVidiyo sasimahla kunye nesikhupheli se-AVD.
Qhubeka nokufaka usetyenziso olukhethileyo. Umzekelo, ukuba ufake i-snaptube.
Ngenisa isicelo. Ujongano lwayo lulula kakhulu. Ngaphezulu zonke izicelo onokuzikhuphela kwiividiyo. Cofa kwi icon ye-twitter.
Ngokukhawuleza emva kokucinezela le icon, uya kuba nakho ukuskrolela umgca wexesha kwiprofayili yakho ye-twitter kwisicelo se-snaptube. Fumana i-tweet apho ividiyo ibanjwe khona. Cinezela ividiyo ukuqala ukudlala.
Ngaphambi nje, uza kubona i icon yotolo kwikona esezantsi ekunene yevidiyo. Ngokucinezela olu tolo. Isicelo siza kukubonisa ividiyo kunye nezisombululo onokukhetha kuzo. Khetha oyithandayo.
Nje ukuba zonke iinketho zikhethwe, ividiyo iya kuqala ukukhutshelwa. Ekugqibeleni, iya kufumaneka kwi "snaptube downloads" kwifolda, eya kubonakala kwigalari yakho.
I-Snaptube kwelinye icala inako ukukhuphela iividiyo ezininzi ngaxeshanye. Le nkqubo iyafana kuzo zonke izicelo zomphathi wokukhuphela.
Xa uqhagamshele kwi-desktop web browser
Unokulandela le miyalelo ingezantsi:
Khangela iphepha lokukhuphela ividiyo kunye nesikhangeli sewebhu njengaye https://www.downloadtwittervideo.com/ o https://www.savetweetvid.com/es, ukubiza imizekelo embalwa.
Inkqubo iyafana kakhulu kula maphepha. Kodwa kuqala, kuya kufuneka ukhuphe ikhonkco kwiphepha le-twitter apho i-tweet nevidiyo ikhoyo. Eli khonkco likwi-bar ye-URL phezulu kwiinjini yokukhangela.
Ukopa ikhonkco kwaye uye kwiphepha lokukhuphela kwakhona. Ukufika apho, ubeka ikhonkco kwibar yomsebenzi ekumbindi wephepha. Xa uyincamathisela, ucinezela i icon yokukhuphela, ngasekunene kwebar.
Eli phepha liya kukunika isisombululo kunye nefomathi yeenketho. Ukhetha leyo ibonakala ilungile kuwe kwaye inkqubo iya kuqala kwangoko. Emva koku, ividiyo iya kugcinwa kwifolda yokukhuphela.
1 Ukuqala inkqubo yokukhuphela
3 Xa uqhagamshele kwi-desktop web browser
3.1 Unokulandela le miyalelo ingezantsi: